Yan Aung: မြန်မာဘလော့ဂါများရဲ့ Unicode စနစ်
အနော်လည်းပါမယ်... ဘယ်နေရာက နေရနေရ....
သိပ်တောမလွယ်ဝူးထင်တယ်.. ဒါပေမယ် .. ချကြည်ကြတယ်ပေါ့..
မောင်ရန် ဒီပို့စ်လေးတင်တာ အရမ်းကောင်းတယ်.. ဖိုရမ်ထဲလည်း ဒါလေး ပြန်ရေးထားပါလား. ကိုမင်းကျော် တော့ပစ်အောက်မှာလေ.. မူပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုယ်စဉ်းစားထားတာလေးတွေ နောက်တော့ ပြောပြပါမယ်။
I am www.hteinkmin.blogspot.com here, iam away from my house at the moment, however, very appreciated to read this article. I dont have so much knowledge on programming, however i will try to support whatever i can from my side. Eg, Financially!
အင်းဗျာ ခက်တာပဲ အလုပ်တောင်ဖြစ်မယ်မကြံသေးဘူး ရောင်းမယ်တကဲကဲနဲ့
ပညာအား၊ လူအား၊ ငွေအား အကူအညီပေးဖို့ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
ဒါပေသိ အားငယ်လိုက်တာ ပညာဆိုလို့ ကလဲ Unicode နဲ့ ပါတ်သက်လို့ နကန်းတလုံးမှ မသိဘူး၊ ငွေအားဆိုရင်လဲ ကလေးမုံ့ ဖိုးလောက် ဖြစ်နေမှာ အားနာလိုက်တာ။ လူအားကတော့ ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဟင် ကူညီနိုင်သမျှတော့ တတ်အားသရွေ့ အင်တိုက် အားတိုက် ကူညီပါရစေ။ မြန်မာ စာပေ သဒ္ဒါ အရေးအသား စာရွက်စာတမ်းနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေဘာတွေ လိုတာရှိရင်တော့ ကူရှာပေးနိုင်မှာပါ။
ကိုရန်အောင်ရေ မြန်မာ ယူနီကုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပျော်စရာကြီးပေါ့ခင်ဗျာ... ဒါပေမယ့် အဲဒါကကော ကျွန်တော့်တို့ ယူနီကုတ် လုပ်တဲ့ထဲမပါတဲ့ ကျန်တဲ့ ဘလော့ခ်ဂါ တွေ အားလုံးကို ဖရီး ပေးမှာလားခင်ဗျာ... ဇော်ဂျီက လိုင်စင်ဖြစ်ခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ တင်ပြီးသားပို့စ်တွေကို ဘယ်လိုပြန်ပြင်ရမှာပါလဲ ခင်ဗျာ
alpha ကပေးထားပါသေးတယ် ကိုရန်အောင်
လက်ရှိ အချိန်ထိ တော့ ကျွန်တော့် ဆီမှာ ဒေါင်းလုပ် ဆွဲလို့ရသေးတယ်
ကျွန်တော်တို့ အခု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးနေတဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ယူနီကုတ်ဒ် စနစ်ကို Commercial License လုပ်ပစ်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါလောကကို ဘယ်လို သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲ.